Ụmụaka na - echere kpakpando - Atụmatụ Echiche Tattoos
Mkpụrụ obi Star maka ụmụaka
1. Star Ụdị na igbe eme ka anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka Ụdị Ụtọ mara mma n'elu ọnụ. Ejiji egbu egbu a mara mma.
2. Ụdị Star na ejiji ink na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahọrọ Tattoo Tattoo na ejiji onk nke onu n'elu; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
3. Ụdị Star na mkpịsị ink nke oji na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown na-ahụ Tattoo Tattoo na-eji oji ink dee ya n'akụkụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
4. Star Ụdị n'olu na -eme ihe omuma oma na-eme ka anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ ndị na-eto eto na-etinye aka na-enweghị aka ga-amasị Star Tattoo na -emepụta ink oma na n'olu; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ihe mara mma
5. Ụmụ nwanyị dị ka Star Ụdị na ụkwụ iji mee ka ọ mara ya
Ụmụ agbọghọ na-eme ka Star Tattoo dị n'ụkwụ ha iji gosi ụkwụ ha ma mee ka ha mara mma
6. Ụdị Star na -acha anụnụ anụnụ na-eme ka nwanyi mara anya
Ndị inyom hụrụ Ụdị Star a na-eji ejiji na-acha anụnụ anụnụ eme ka ogwe aka mara mma
7. Ndị inyom na-eme Star Star Ụdị n'akụkụ ime ka ha maa mma
Ndị inyom na-enwe mmasị ime Star Tattoo n'akụkụ ha iji mee ka ha yie ihe mara mma na ihe mara mma na pubic
8. Star Ụdị na nkwonkwo ụkwụ ya na ejiji onk na-acha odo odo na pink na-eweta ezigbo mma
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ Ụtọ Star na ụkwụ na-eji oji na-acha oji na pink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ihe dị mma ma mara mma
9. Star Ụdị maka Nwaanyị na-eji ejiji ink odo odo; eme ka ha mara mma
Ndị inyom hụrụ Star Tattoo maka Ndị inyom na-eji ejiji ink odo odo na nkwojiaka. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dịkwuo mma
10. Ụdị Star na nwa agbọghọ na-eme ka ọ mara mma
Ụmụ agbọghọ hụrụ Star Tattoo n'anya n'akụkụ ha iji mee ka ha mara mma
11. Ụdị Star na azụ azụ na-eweta anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ Brown ga-enwe mmasị na mkpịsị onk nke nwa ojii Star Tattoo na azụ azụ; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
12. Star Ụdị n'olu eme ka nwanyi yie anya
Ụmụ nwanyị Brown hụrụ Star Tattoo n'anya azụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
okpueze okpuezeakara ntụpọegbu egbu mmirikoi ika tattooEgwu ugonnụnụegbu egbuima ima mmaGeometric Tattoosegbu egbu egbuUche obiỤdị ekpomkpaụkwụ akana-egbu egbuegwu egwuọdụm ọdụmazụ azụaka mma akaechiche egbugbuenyi kacha mma enyizodiac akara akaraegbugbu egbugbuegbu egbu hennaaka akandị na-egbuke egbukeagbụrụ eboudara okooko osisindị mmụọ ozingwusi pusiụmụnne mgbuna-adọ aka mmaegbu egbu osisi lotusegbu egbu maka ụmụ nwoken'olu oluọnwa tattoosdi na nwunyemma tattoosenyí egbu egburip tattoosarịlịka arịlịkaegbu egbu diamondNtuba ntughariaka akaAnkle Tattoosakpị akpịegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu okpuegbu egbu ebighi ebiakwara obimehndi imewe